यस कारण महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् : डा. खेम कार्की – Idea Khabar
यस कारण महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् : डा. खेम कार्की
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २५, शनिबार १८:२१
सुरक्षित यौन क्रियाकलापमा पहिलो मानिन्छ हस्तमैथुन । हस्तमैथुन एकल यौन क्रियाकलाप हो । यौन क्रियाकलापका बारेमा गरिएका खोज अनुसन्धान अनुसार स्वास्थ्य र सम्बन्धहरूमा हस्तमैथुनका धेरै फाइदाहरू हुन्छन् ।
हस्तमैथुनबाट पुरूषहरूले मात्र होइन महिलाहरूले पनि भरपूर फाइदा प्राप्त गर्न सक्छन् । यी फाइदाहरू यस प्रकार छन् ।
१. हस्तमैथुन सामान्य क्रिया
विभिन्न अनुसन्धान अनुसार सम्पूर्ण महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एकपटक हस्तमैथुन गरेको पाइन्छ । जसको उमेरसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन । हस्तमैथुन गर्दा महिलाले प्रायः औँला र विद्युतीय कम्पन दिने वस्तुको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
महिलाहरूले हस्तमैथुन गरेर आफ्नो यौनसाथी थाकेको बेला अथवा बाहिर गएको बेला पनि उत्तिकै सन्तुष्टि लिन सक्छन् ।
२. मनस्थिति ताजा राख्न हस्तमैथुन
यौनसाथी बिना नै हस्तमैथुन गर्न सकिने हुनाले विभिन्न तनावबाट महिलाले मुक्ति पाउँछिन् । एकल यौन क्रियाकलापले महिलाहरूमा थप शक्ति बढाउनुको साथै उदास मनस्थितिमा सुधार ल्याउँछ ।
यो क्रियाकलाप एकल हुने हुँदा महिलाले यौनसाथीको सन्तुष्टिको चिन्ता बिना नै पूर्ण अनुभव लिन सक्छन् । आफ्नो यौनसाथीबाट चरम सुखमा पुग्न नसक्दा पनि महिलाहरू निराश हुने गर्छन् । त्यस्तो निराशाबाट मुक्ति पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि हस्तमैथुन हो ।
३. यौनजीवनमा सुधार
कतिपय महिलाले हस्तमैथुन गर्दा आफ्नो भविष्यको यौन जीवनमा खराव असर पर्ने हो कि भनेर भ्रम र चिन्ता पालेका हुन्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो हस्तमैथुन गर्ने बानीले यौनसाथीलाई सन्तुष्टि दिन असफल भइएला भन्ने कुराले पनि सताएको हुन्छ । तर हस्तमैथुनले यौनसाथीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्छ ।
हस्तमैथुन गर्ने महिलाले आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने कुराको महशुस गरेका हुन्छन् र आत्मविश्वासका साथ यौनजीवनमा साथीसँग यौनसम्पर्क राख्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा त आफ्नो यौनसाथीलाई यौनक्रियाका बारेमा सिकाउन पनि सक्छन् । उत्तेजनात्मक वस्तुको साथ हस्तमैथुन गर्ने महिलाको यौनजीवनमा साथीसँगको यौनसम्बन्ध राम्रो रहन्छ । अझ हस्तमैथुन गर्ने महिलाले यौनसम्पर्कका बेला आफ्नो यौनसाथीलाई भरपूर सहयोग गरेर यौनजीवनलाई अझै सफल बनाइरहेका हुन्छन् ।
४. आनन्द महसुस
हस्तमैथुनले आनन्द लिन सहयोग गर्छ । सामान्यतया महिलाहरू बढी नै तनावग्रस्त रहने गर्दछन् । त्यसैले स्वतः आनन्द दिने क्रियाकलापबाट तनाव भङ्ग हुने हुँदा हस्तमैथुनले महिलालाई तनावरहित र आनन्दित तुल्याउँछ ।
यौनसम्पर्कबाट चरमसुख प्राप्त गर्न नसकेका महिलाले हस्तमैथुनबाट चरमसुख प्राप्त गर्ने हुनाले यो बढ्दा आनन्ददायी हुन्छ |